Kungani Amaqembu Ezokumaketha kanye nawe-IT Kufanele Abelane Ngezibopho Ze-Cybersecurity | Martech Zone
NgoLwesihlanu, January 21, 2022 NgoLwesihlanu, January 21, 2022 Alexander García-Tobar
Lo bhubhane ukhulise isidingo sokuthi wonke umnyango ngaphakathi kwenhlangano unake kakhulu ukuphepha kwe-inthanethi. Lokho kunengqondo, akunjalo? Uma sisebenzisa ubuchwepheshe obuningi ezinhlelweni zethu nasemsebenzini wansuku zonke, singaba sengozini enkulu yokwephulwa. Kepha ukwamukelwa kwezinqubo ezingcono ze-cybersecurity kufanele kuqale ngamaqembu okuthengisa awazi kahle.
I-Cybersecurity ibilokhu ikhathaza i-Information Technology (IT) abaholi, Izikhulu Eziyinhloko Zezokuphepha (CISO) kanye Nezikhulu Eziyinhloko Zezobuchwepheshe (I-CTO) noma Isikhulu Esiphezulu Solwazi (I-CIO). Ukukhula okushubile kobugebengu bamakhompuyutha - ngokwesidingo - kukhuphule ukuphepha kwe-inthanethi ukwedlula lokho ukukhathazeka kwe-IT nje. Ekugcineni, Abaphathi be-C-suite namabhodi abasaboni ubungozi be-cyber 'njengenkinga ye-IT' kodwa njengosongo oludinga ukulungiswa kuwo wonke amazinga. Ukuze ulwe ngokugcwele nomonakalo ukuhlaselwa kwe-cyberattack okuphumelelayo kudinga izinkampani ukuthi zihlanganise ukuphepha kwe-cybersecurity kuqhinga labo lokulawula ubungozi.
Ukuze uthole ukuvikelwa okugcwele, izinkampani kufanele zilinganise phakathi kwezokuphepha, ubumfihlo kanye nolwazi lwamakhasimende. Kodwa izinhlangano zingafinyelela kanjani kule bhalansi ekhohlisayo? Ngokukhuthaza amaqembu abo okukhangisa ukuthi abambe iqhaza elibonakalayo.
Kungani Kufanele Abakhangisi Bakhathalele I-Cybersecurity?
Igama lomkhiqizo wakho lihle kuphela njengesithunzi sakho.
Kuthatha iminyaka engu-20 ukwakha igama nemizuzu emihlanu ukulicekela phansi.
Manje-ke kwenzekani lapho izigebengu ze-inthanethi zithola ulwazi kanye nokufinyelela ezikudingayo ukuze zizenze inkampani ngempumelelo, zikhohlise amakhasimende ayo, zintshontshe idatha, noma okubi nakakhulu? Inkinga enkulu yenkampani.
Cabanga ngakho. Cishe u-100% wamabhizinisi athumela ama-imeyili okuthengisa nyanga zonke kumakhasimende awo. Idola ngalinye lokumaketha elichithiwe libona imbuyiselo ekutshalweni kwezimali (ROI) cishe kwama-$36. Ukuhlasela kobugebengu bokweba imininingwane ebucayi okulimaza umkhiqizo womuntu kusongela impumelelo yesiteshi sokumaketha.
Ngeshwa, kulula kakhulu ukuthi abakhwabanisi nabalingisi ababi bazenze omunye umuntu. Ubuchwepheshe obuvimbela lokhu kudlwengulwa bukhulile futhi buyatholakala, kodwa ukutholwa buyantuleka ngoba ngezinye izikhathi kuba nzima ngenhlangano ye-IT ukukhombisa ibhizinisi elicacile. RIO ngezinyathelo zokuphepha kuyo yonke inhlangano. Njengoba izinzuzo zamazinga afana ne-BIMI ne-DMARC ziba sobala kakhulu, ukumaketha kanye ne-IT kungapenda indaba ehlanganyelwe ephoqelelayo. Sekuyisikhathi sendlela ebanzi yokuphepha ku-inthanethi, leyo ebhidliza ama-silo futhi ikhulise ukusebenzisana phakathi kweminyango.
IYAZI ukuthi i-DMARC ibalulekile ekuvikeleni izinhlangano ebugebengwini bokweba imininingwane ebucayi nasekulimaleni kwesithunzi kodwa iyazabalaza ukuthola uxhaso ukuze isetshenziswe ebuholini. Izinkomba Zomkhiqizo Zokuhlonza Umlayezo (I-BIMI) kuza, kudala isasasa emnyangweni wezokumaketha, okufunayo ngoba uthuthukisa amanani avulekile. Inkampani isebenzisa i-DMARC ne-BIMI futhi voilà! I-IT ifinyelela ukuwina okubonakalayo, okukhonkolo futhi ukumaketha kuthola iqhubu elibambekayo ku-ROI. Wonke umuntu uyawina.
Ukusebenzisana Kweqembu Kungukhiye
Iningi labasebenzi libuka i-IT yabo, iminyango yokuthengisa neminye iminyango kuma-silo. Kodwa njengoba ukuhlasela kwe-inthanethi kuba yinkimbinkimbi futhi kuyinkimbinkimbi, le nqubo yokucabanga ayizuzi muntu. Abakhangisi nabo banesibopho sokusiza ukuvikela imininingwane yenhlangano nekhasimende. Ngenxa yokuthi baxhumeke kakhulu eziteshini ezifana nenkundla yezokuxhumana, izikhangiso nama-imeyili, abakhangisi basebenzisa futhi babelane ngenani elikhulu lolwazi.
Izigebengu ze-Cybercriminal ezethula ukuhlasela konjiniyela bezenhlalo zisebenzisa lokhu ukuze zizuze. Basebenzisa i-imeyili ukuthumela izicelo zomgunyathi noma izicelo. Uma evulwa, lawa ma-imeyili athelela amakhompyutha abadayisi ngohlelo olungayilungele ikhompuyutha. Amathimba amaningi okukhangisa aphinde asebenze nabathengisi bangaphandle abahlukahlukene kanye nezinkundla ezidinga ukufinyelela noma ukushintshaniswa kolwazi oluyimfihlo lwebhizinisi.
Futhi uma amaqembu okuthengisa kulindeleke ukuthi abonise ukukhula kwe-ROI kuyilapho enza okuningi ngokuncane, ahlala efuna ubuchwepheshe obusha, obusha okwandisa ukukhiqiza nokusebenza kahle. Kodwa lezi ntuthuko zingadala amathuba okungahlosiwe okuhlasela kwe-cyberattacks. Kungakho abakhangisi nezingcweti ze-IT kufanele baphume ezinqolobaneni zabo ukuze basebenzisane futhi baqinisekise ukuthi ukuthuthukiswa kokumaketha akushiyi inkampani engcupheni yezokuphepha. Ama-CMO nama-CISO kufanele ahlole izixazululo ngaphambi kokuthi zisetshenziswe futhi qeqesha abasebenzi bezentengiso ukuthi babone futhi babike ubungozi bokuphepha ku-inthanethi obungaba khona.
Ochwepheshe be-IT kufanele banike amandla ochwepheshe bezentengiso ukuze babe abaphathi bezindlela ezingcono kakhulu zokuphepha kolwazi ngokusebenzisa:
Ukuqinisekiswa kwezinto eziningi (MFA)
Abaphathi bephasiwedi bayathanda Dashlane or I-LassPass.
Ukungena ngemvume okukodwa (I-SSO)
Elinye ithuluzi elibalulekile elizofakwa kumasu okuphepha ku-inthanethi wabadayisi? I-DMARC.
Inani le-DMARC Lamathimba Okuthengisa
Ukuqinisekisa Umlayezo Osuselwe Esizindeni, Ukubika kanye Nokuhambisana kuyizinga eligolide lokuqinisekisa i-imeyili. Izinkampani ezamukela i-DMARC at Enforcement ziqinisekisa ukuthi izinhlangano ezigunyaziwe kuphela ezingathumela ama-imeyili esikhundleni sazo.
Ngokusebenzisa i-DMARC (kanye nezimiso eziyisisekelo ze-SPF ne-DKIM) ngempumelelo nangokufika kokuthi Ukuqinisa, izinkampani zibona ukulethwa kwama-imeyili okuthuthukisiwe. Ngaphandle kokuqinisekisa, izinkampani zizishiya zivulekele izigebengu ze-inthanethi zisebenzisa isizinda sazo ukuze zithumele ama-imeyili obugebengu bokweba imininingwane ebucayi nawogaxekile. I-DMARC at Enforcement ivimbela izigebengu ze-inthanethi ekubambeni ukugibela kwamahhala ezizindeni ezivikelekile.
Ayikho i-SPF noma i-DKIM egunyaza umthumeli ngokumelene nenkambu ethi “Kusuka:” ebonwa abasebenzisi. Inqubomgomo ecaciswe kwirekhodi le-DMARC ingaqinisekisa ukuthi kukhona “ukuqondanisa” (okungukuthi okufanayo) phakathi kokuvela kokuthi: ikheli elibonakalayo kanye nesizinda sokhiye we-DKIM noma umthumeli oqinisekisiwe we-SPF. Leli su livimbela izigebengu ze-inthanethi ekusebenziseni izizinda mbumbulu ku Kusuka: inkundla ekhohlisa abamukeli futhi ivumele izigebengu ze-inthanethi ukuthi zithuthele kabusha abasebenzisi abangazi ukuthi baye ezizindeni ezingahlobene ezingaphansi kolawulo lwabo.
Amaqembu ezokumaketha athumela ama-imeyili hhayi nje ukukhomba abangaba amakhasimende. Ekugcineni, bafuna lawo ma-imeyili avulwe futhi asetshenziswe. Ukuqinisekisa kwe-DMARC kuqinisekisa ukuthi lawo ma-imeyili afika emabhokisini okungenayo ahlosiwe. Amabhrendi angaqinisa ukuqina kwawo nakakhulu ngokwengeza Izinkomba Zomkhiqizo Zokuhlonza Umlayezo (BIMI).
I-BIMI Iguqula I-DMARC Iyenze I-Tangible Marketing ROI
I-BIMI iyithuluzi wonke umakethi okufanele alisebenzise. I-BIMI ivumela abakhangisi ukuthi bengeze ilogo yomkhiqizo wabo kuma-imeyili avikelwe, okuboniswe ukuthi kwenyusa amanani avulekile ngo-10% ngokwesilinganiso.
Ngamafuphi, i-BIMI iyinzuzo yomkhiqizo kubakhangisi. Yakhelwe phezu kobuchwepheshe bokuqinisekisa i-imeyili obuqinile - i-DMARC lapho isetshenziswa - kanye nokusebenzisana phakathi kwababambe iqhaza abahlukene okuhlanganisa iminyango yezokukhangisa, i-IT kanye nezomthetho.
Abakhangisi bebelokhu bethembele emigqeni yesihloko ehlakaniphile, ehehayo ukuze babambe ukunaka kwabamukeli, kodwa nge-BIMI, ama-imeyili asebenzisa ilogo ayashesha futhi kube lula ukukhonjwa. Noma abathengi bengayivuli i-imeyili, bayayibona ilogo. Njengokufaka ilogo kusikibha, ibhilidi, noma enye i-swag, ilogo ku-imeyili ngokushesha ibiza ukunaka kwabamukeli kumkhiqizo - intuthuko engakaze yenzeke ngaphambili ngaphandle kokuvula umlayezo. I-BIMI isiza abakhangisi ukuthi bathole ukungena kubhokisi lokungenayo ngokushesha okukhulu.
I-DMARC ye-Valimail njengesevisi
Ukugcinwa kwe-DMARC is indlela eya e-BIMI. Ukuhamba ngale ndlela kudinga ukuqinisekisa ukuthi i-DNS iqinisekisa ngokufanelekile wonke amameyili athunyelwe - umsebenzi odla isikhathi wamabhizinisi. I-15% kuphela yezinkampani eziphothula ngempumelelo amaphrojekthi azo e-DMARC. Kufanele kube nendlela engcono, akunjalo? Nakhu!
I-Valimail Authenticate inikeza i-DMARC njengesevisi, okuhlanganisa:
Ukucushwa kwe-DNS okuzenzakalelayo
Umazisi womthumeli ohlakaniphile
Uhlu lwemisebenzi okulula ukululandela olusiza abasebenzisi ukufinyelela ngokushesha, okuqhubekayo kokusetshenziswa kwe-DMARC
I-DMARC Authentication™ ithatha ubungozi ekuhlinzekeni kwe-DNS. Ukubonakala kwayo okuphelele kuvumela izinkampani ukuthi zibone ukuthi ubani ozithumelela i-imeyili. Ukugeleza komsebenzi okuqondiswayo, okuzenzakalelayo kudlulisa abasebenzisi kumsebenzi ngamunye ukuze balungiselele amasevisi ngaphandle kwesidingo solwazi olujulile, lobuchwepheshe noma ukuthola inkontileka yobuchwepheshe bangaphandle. Okokugcina, izibalo zokuqukethwe zisiza ukuqinisekisa izincomo ezizenzakalelayo - futhi izexwayiso zigcina abasebenzisi benolwazi lwakamuva.
Iminyango yokumaketha ayikwazi ukuhlala ezinqolobaneni, ivikelekile ekukhathazekeni nge-cybersecurity, manje. Ngenxa yokuthi afinyeleleka kalula ngenxa yokuba khona okukhudlwana ku-Twitter, i-LinkedIn nezinye izinkundla zokuxhumana, izigebengu ze-inthanethi zibabona njengezinhloso ezilula, nezisebenzisekayo. Njengoba izinhlangano zibona ukubaluleka kokudala isiko lokuqwashisa ngokuvikeleka ku-inthanethi, kufanele zimeme amaqembu azo ezentengiso ukuze ahlanganyele etafuleni lokulawula ubungozi namaqembu e-IT kanye ne-CISO.
Tags: I-BIMIbrand ukudunwacisectoukuqhutshwa kwe-cyberattackskubugebengu obuku-intanethiUkuphepha kwe-cyberI-DMARCukuqinisekiswa kwe-imeyiliimeyili Marketingidumela le-imeyiliukuphathwa kwegama le-imeyiliukuqinisekiswa kwe-multi-factorukuphingaidumelai-spoofing
Usomabhizinisi we-serial kanye nesikhulu esiphezulu emhlabeni, u-Alexander ubeyi-CEO ezinkampanini ezimbili ezedlule futhi useke waphatha amaqembu okuthengisa emhlabeni wonke ezinkampanini ezintathu eziye kwi-IPO. Ubambe izikhundla zomhlaziyi kanye nezikhulu ezinkampanini eziphambili zocwaningo njengeThe Boston Consulting Group neForrester Research kanye neziqalo zeSilicon Valley ezifana neValiCert, Sygate, neSyncTV.